Ny klioban'ny alina manandanja indrindra eto an-tany LOUIS XIII hanolotra Decanter mena tsy dia fahita firy N ° XIII
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny klioban'ny alina manandanja indrindra eto an-tany LOUIS XIII hanolotra Decanter mena tsy dia fahita firy N ° XIII
Tsy misy afa-tsy 200 N ° XIII mena decanters misy eran'izao tontolo izao, izay midika fa voafaritra iray decanter isaky ny klioba isaky ny alina ny fizarana.
LOUIS XIII kognac dia vokatry ny zava-bitan'ny fiainana tao amin'ny Cellar Masters, mifangaro ny eaux-de-vie tsara indrindra amin'ny fampiasana voaloboka nambolena irery tao Grande Champagne. Zava-dehibe ny i LOUIS XIII mba hiainana ho fombafomba, isaky ny mitete, mba hanehoana ny fitiavan'ny tsiro maharitra sy mivoatra, ao anatin'ny fotoana iray tsara indrindra. Ireo mpanjifa izay te-hanandrana ny vintan'izy ireo amin'ny alàlan'ny baiko iray amin'ny N ° XIII Experience dia afaka miditra amin'ny LOUIS XIII Society * na mividy mivantana amin'ny alàlan'ny alim-pandihizana voafantina. Ny masoivoho marika LOUIS XIII dia hifandray amin'izy ireo tsirairay avy mba hikarakara ity traikefa nahafinaritra ity. Tena miavaka ny traikefa hany ka misy vintana lehibe kokoa hanaiky ny iraka amin'ny habakabaka.
Ny decanter N ° XIII voalohany tonga tany Etazonia dia haseho ny 15 Oktobra ao amin'ny OMNIA any Las Vegas. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fisian'ny vokatra dia mifandraisa: [email voaaro]
MANARITRA NY FOTOANA AMIN'NY FOMBA RITUALY MANOKANA
Ny fotoana dia ny akora LOUIS XIII, ary ny N ° XIII mamela antsika hitrandraka fitoviana vaovao amin'ny fotoana. Ny fiainana amin'ny alina dia faritana amin'ny fahatsapana ny fahalalahana, ny fahafinaretana ary ny fankalazana, izay rehetra voasambotra sy nohamafisin'ny fombafomba fanandramana N ° XIII: «decanter» kristaly mena isa, naseho avy teo ambanin'ny jirofo LED. Solomaso kristaly enina mena enina amin'ny lovia mamirapiratra no miaraka aminy, miavaka eo amin'ny vahoaka. Ny mena no loko mamaritra ny zavatra niainana, misambotra ny filàna, ny herinaratra ary ny fiainana ny alina. LOUIS XIII dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny pipette kognac manokana, fantatra amin'ny hoe Spear, mba hanitarana ny fombafomba fanompoana isaky ny mitete. Ny fofona manitra sy ny naoty an'ilay kôkôb miavaka dia azo tsiroina amin'ny halavany. LOUIS XIII dia manamboatra ny gadona azy manokana amin'ny alina.
DECANTER noforonin'i TANANA
LOUIS XIII dia niara-niasa tamin'i Saint – Louis, mpanamboatra fitaratra tranainy indrindra any Eropa, hamorona ny decanter mena N ° XIII vita mena vita amin'ny tanana sy ny solomaso mena. Ny volom-boasary mena mavitrika amin'ny fitaratra dia tsy azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fizotrany miafina izay mila ny fanampiana volamena. Saint-Louis 'niombom-piombonam-po tamin'ny fomban-drazana, savoir – faire ary ny fanavaozana dia miaina amin'ny volom-borona tsy fahita firy: tsofina, tapaka, voaravaka ary voasokitra amin'ny tanana, ary isaina tsirairay, dia vita tamin'ny tsimok'aretina LOUIS XIII sonia sy ny vozon'ny paladium . Taorian'ny fombafomba fanandramana N ° XIII, ny mpanjifa dia mety handao ny klioban'ny alina miaraka amin'ny decanter N ° XIII (raha mamela ny fitsipiky ny klioba sy ny lalàna mifehy azy eo an-toerana) ho fahatsiarovana sarobidy indrindra amin'ny alina tsy hay hadinoina indrindra. Ny fijanonan'ny NFC dia mamela ny tompony hiditra irery amin'ny LOUIS XIII Society sy ny tombotsoany rehetra amin'ny maha mpikambana azy.
Ny vidin'ny varotra LOUIS XIIII N ° XIII dia atolotra arakaraka ny fangatahana.
* Ny fikambanana LOUIS XIII dia klioban'ny mpikambana tsy miankina ho an'ny tompon'ny decanters LOUIS XIII Cognac.